Qtum na-enye ngwa ọrụ ya igwe ojii Google Cloud | Site na Linux
Qtum na-enye igwe ojii igwe ojii ya ugbu a site na igwe ojii Google Cloud
Ụlọ ọrụ Qtum Chain Foundation, nke bu ihe eji emeghe uzo nke emere na teknụzụ blockchain, taa kwupụtara mmekorita ya na Google LLC nke ahụ ga-eweta ngwaọrụ mmepe ụlọ ọrụ na Google Cloud.
Site na mkpakọrịta, n'efu iji ngwaọrụ ga - enye ndị mmepe na ndị ọrụ aka ọrụ aka ịhazi ma kesaa ọnụ na Qtum blockchain, yana ịmepụta ngwa na-eji nyiwe ya.
1 Banyere Qtum
1.1 Ngwa Qtum ga-adị na Google Cloud
Teknụzụ Blockchain na-emepụta akwukwo a kesara nke a na-echekwa ya na ihe omimi di elu na otutu ndi mmadu kwenyere ka echekwara data azụmahịa echekwara.
Otu teknụzụ enwere ike iji ya nye data data a pụrụ ịdabere na ya, gbanye ma gbanyụọ ikikere nnweta ma nye ndị nyocha nke ntụkwasị obi na ndị ọzọ nwere ike ijigide nzuzo nke data agbakwunye na agbụ ahụ.
N'ihe banyere ngwaọrụ Qtum, ndị mmepe ha nwere ike iji ikike ngọngọ ndị ọzọ- Smart contracts ma ọ bụ azụmahịa dabere na azụmahịa nke dabere na usoro nke ọnọdụ iji wuchaa.
Mgbe etinyere smart smart na blockchain, a na-etinye igodo cryptographic na nkwụnye ego ruo oge dị ka mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa na nkwekọrịta ahụ kwenyere na ọnọdụ nke nkwekọrịta ahụ agwụla.
Enwere ike ime nke a site na onye nlekọta na-elekọta ya mezue nkwekọrịta ahụ ma ọ bụ enwere ike iji kọmpụta rụọ ọrụ nke ọma na-enyocha ọnọdụ ndị a ma wepụta njide, ma ọ bụ weghachi ya n'aka onye malitere ya.
"Ebe ibido uzo bu ihe omumu ma di mgbagwoju anya, onye ohuru ohuru Qtum bu uzo gosiputara uzo mkpirisi na ngwa iji mee ka o di mfe ma di mfe," onye isi okwu gbasara ozi Qtum, Miguel Palencia kwuru
"Site na teknụzụ nwere ike ịnweta, anyị nwere olile anya imeghe ma gbasaa obodo Qtum iji tinye ndị nwere ahụmịhe sara mbara karị, site na ndị ọkachamara na ndị ọrụ kwa ụbọchị."
Blockchains na nkwekọrịta dị ala dị ala chọrọ nnukwu ọzụzụ na nyocha dị ukwuu.
N'ihi ya, Qtum haziri ngwa oru ya iji mezie ọtụtụ mmemme dị ala karịa ka enwere ike maka ndị ọrụ azụmaahịaNdị nwere obere ahụmịhe ọrụ aka nwere ike gbanwee mgbagha azụmaahịa dị mfe na nkwekọrịta smart, jiri usoro Qtum gbanwee ha na koodu, ma kesaa ma mee ha na-enweghị mkpa ọzụzụ ọzụzụ.
Ngwaọrụ nke Qtum ga-adị na Google Cloud
Ntọala nke ngwaọrụ wepụtara na Google Cloud ọ dị site na Qtum compute engine.
Otu onye nwere ike ịmalite mmepe mmepe zuru oke na Qtum na ịnweta ihe niile onye mmepe chọrọ iji malite ọnụ, mepee ngwa ndị ekesara, nke a maara dị ka Dapps, nwalee ma tinye.
Na mbụ, ndị mmepe chọrọ ibudata, wụnye ma tinye Qtum codebase, tinyekwara ngwaọrụ ndị dị mkpa.
Ugbu a, ihe a niile dị na igwe ojii Google. N'ihi igwe ojii nke ngwa ọrụ na gburugburu ebe obibi, ọ ga-abụ ọhụhụ maka mmelite ndị kachasị ọhụrụ yana ndozi nchekwa sitere na Qtum na akpaghị aka, yabụ ndị mmepe enweghị mkpa ibudata ma wụnye koodu ọzọ.
Palencia kwuru na “Google Cloud bụ ezigbo onye ọlụlụ iji nyere anyị aka ime ka usoro obibi okike dị na blockchain dị mfe na nghọta karịa.
Ihe eji arụ ọrụ Qtum Developer Toolkit na Google Cloud nwere ihe niile dị mkpa iji bido dApps, onye editọ, onye na-ahazi koodu maka ngọngọ, ihe eji eme nkwekọrịta nkwekọrịta mara mma nke a na-akpọ Solar, na ọtụtụ ọba akwụkwọ ndị ọzọ chọrọ iji mezue ọrụ blockchain.
Qtum-Core dị ugbu a maka onye ọ bụla ịmalite na Google Cloud enwere ike inweta ngwa mmepe na koodu isi.
Na mbipụta nke Qtum kwuru na akụrụngwa ha nyere bụ n'efu ha na-echekwa maka ndị mmepe na ndị ọrụ, n'ụzọ dị mfe maka mmepe nke ọnụ na Qtum blockchain n'ụzọ bara uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Qtum na-enye igwe ojii igwe ojii ya ugbu a site na igwe ojii Google Cloud
A tọhapụrụ nsụgharị mbụ nke Guix 1.0 ma ndị a bụ akụkọ ya
Red Hat debuts logo ọhụrụ tupu IBM enweta ya